Factory Kuratidzwa | Xiamen Mushure mekudhinda Kupedza Zvekushandisa Zvinhu, Ltd.
Thermal Laminating Firimu Vagadziri
Bemhapemha Laminating Mugadziri
Corona L aminate Firimu Roll
Kutenderera Laminating Firimu Inotengesa
Jumbo Kutenderera Laminating Firimu
Isa Mega Yakagadziriswa
Yekumhanyisa-kumhanyisa extrusion yekumhanyisa mitsara yekumisikidza yekugadzira yekushisa laminating firimu ine 850MTs kugona pamwedzi.
Yepamberi tekinoroji yepakati chikamu chekuvimbisa imwe yakaenzana ukobvu uye yakasimba yekunamatira simba.
Corona akarapwa laminate mupumburu, asina kana maviri mativi corona akakosheswa kusvika makumi mashanu nemakumi mashanu emadhino.
Yakanaka roll yekumisikidza uye kudzoreredza kweBOPP Thermal Laminating Firimu.
jumbo mupumburu laminating flm spplier, chafariz laminating fim, glossy uye mat, matanho akagadzirwa
Matt rolls ayo anogona kuve akagadziriswa nehupamhi uye kureba.
Xiamen Mushure-kudhinda Kupedza Zvekushandisa Co., Ltd. kusvika parizvino share-inobata sere akawanda extrusion yekupfeka mitsara uye gumi yekucheka michina yakaungana kugadzira epurasitiki roll yemafuta anopisa mafirimu, kuburitsa 750MTs pamwedzi.
Kuti uve nechokwadi chekushandira yemhando yepamusoro yekumonera laminating firimu, yedu extrusion mitsara inofambiswa neiyo yepamberi yakaoma yakaoma technical zvikamu zvekupikira izvo zvinovimbisa yakanakisa symmetrical yekumhara ukobvu uye yakakwirira simba yekubatanidza simba.
Kwemazhinji yenguva, tisati tadzorerwa kumashure kana kusonhedzwa, mavhoriyamu edu akaomeswa akaomeswa kwezuva rimwe mushure mekuputirwa neglue yeEVA. Maitiro aya anosimbisa kunamatira kukosha uye inogonesa iyo laminate mapurasitiki anotenderera zvakanyanya kutsetseka ichidzikisa static.
Ruzivo rwakawanda pamusoro pekupisa kwekutsvaira, inzira yekunamatira iyo yatinogadzira laminates nekuda kwekukanganisa kwekupisa. Isu tinodaidzawo kuti kupisa kana kuomesa kuoma. Aya mafirimu ekumonera anogadzirwa ne extrusion yekumhanyisa maitiro uye kune rimwe divi remufirimu kupisa inonamira glue kupfeka kunoitwa, kunyanya iri BOPP + EVA kana PET + EVA.
Thermal laminating inopfuura nepakati pekupisa roll kana laminator. Isu tinofanirwa kuisa kumwe kumanikidza kunonzwisisika uye lamination yaitwa. Kuomesa kuomarara kuri kuwedzera kubatsira nekuda kwekukosha kwaro pakumomesa kwakanyorova. Isu hatifanire kuisa imwe yekunamatira kunamatira.
Zvinonakidza pamusoro apa?
Ndapota usazeza kutaura nesu:
Hot Stamp, Hot Foil, Hot Angazvidzvisa tsikwa, kupisa lamination firimu, vakagadzira simbi bopp vagadziri, polyester firimu,